Shirkad Shaqaalaheeda ku Khasabta in ay lugeeyaan + Maxay Tahay Sababtu | Raadgoob
Shirkad Shaqaalaheeda ku Khasabta in ay lugeeyaan + Maxay Tahay Sababtu
November 30, 2018 - Written by admin
Shirkad Shiinaha laga leeyahay ayaa aad loo dhaliilay ka dib markii ay soo baxday in ay shaqaalaheeda ganaaxdo haddii ay bishii socon waayaan 180,000 oo tallaabo, sida ay wararku sheegayaan.
Sida uu qoray wargeyska Information Times, shaqaalaha shirkad aan magaceeda la shaacin oo ku taalla magaala Guangzhou oo dhismaha ka shaqaysa ayaa shaqaalaha ganaaxday 0.01 yuan (lacagta Shiinaha) tallaabo kaste oo ay ka hoos mareen intii loo qabtay.
Mid ka mid ah shaqaalaha oo la dhoho ‘Little C’ ayaa wargeyska u sheegay in shaqaalaha ay ku adkaatay in ay 6,000 oo tallaabo socdaan saacadaha aysan shaqada ku jirin.
Liu Fengmao oo qareen u ah shirkad dalkaas ka shaqaysa ayaa sheegay in shirkaddan la eedaynayo aysan xaq u lahayn in ay ay ku ganaaxdo shaqaalaheeda iyada oo tallaabooyinka ay qaadaan hal beeg uga dhigaysa firfircoonidooda, taasina ay jahwareer dheeri ah u keeni karto shirkadda.
Liu wuxuu sheegay in shaqaalaha ay sheegan karaan in socodka shaqada bannaankeeda ah uu yahay wakhti dheeri ah oo shirkaddu ay ka qaadatay amaba dhaawac yada soo gaara inta ay lugaynayaan ay xisaabsan karaan kuwo shirkadda darteed u soo gaaray.
Wargayska Information Times wuxuu sheegay in kiisan uusan ahayn midka kali ah ee la og yahay ee shirkaddii ay shaqaalaha u dajisay xeer ku saabsan lugaynta.
Bishii Janaayo ee sannadkii 2017 shirkad teknoolajiyadda ka shaqaysa oo ku taalla magaalada Chongqing ayaa lagu dhaliilay in ay shaqaalaha ku amartay in ay maalin walba socdaan 10,000 oo tallaabo. Wargayska Chongqing Evening Post ayaa ku warramay in shirkaddu ay arrintaas u adeegsan jirtay in ay ku qiimayso sida shaqaaluhu u kala firfircoon yihiin.
Dad badan oo wax ku qora barta Shiinaha caanka ka ah ee Sina Weibo ayaa tilmaamay sida ay ula yaabeen ugana soo horjeedaan shuruuddaas shaqada lagu laray. Shirkaddu waxay raadinaysaa qaab ay dadka lacag uga jarato,” ayuu yiri qof ka hadlaya shirkaddaas magaalada Guangzhou ku taalla.
Balse qaar kale ayaa ku dooday in shardigan uu faa’iido leeyahay. “Caafimaad ayaa laga helaa socodka” ayuu yiri” qof kale oo bartaas isticmaala.